स्वेताको ढोंगी जीवन, आफू करोडौंको पार्टी गर्ने अनि निर्माणाधिन माझी बस्तीको लागि सहयोग याचना ! « रिपोर्टर्स नेपाल
स्वेताको ढोंगी जीवन, आफू करोडौंको पार्टी गर्ने अनि निर्माणाधिन माझी बस्तीको लागि सहयोग याचना !
काठमाडौं, ३० माघ । नायिका स्वेता खड्काले निर्माणाधिन माझी बस्तीको लागि सहयोग गर्छु भन्नेहरुले सहयोग नगरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा गरेपछि अहिले उनको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। खड्काले आफूहरुले कुनै जोर जबरजस्ती नगरिकनै पनि स्वतःस्र्फूत रुपमा सहयोग कबुल गरेका तर अहिलेसम्म कुनै सहयोग नगरेको लिष्ट लामै रहेको कुरा लेखेकी थिईन् । तर, उनका फ्यानहरुले नै उनीमाथि प्रश्न गरेका छन् । आफू करोडौं खर्च गरेर विहे भोजमा सरिक हुने तर माझी वस्तीको लागि सहयोगको याचना गर्ने भनेर प्रश्न समेत फ्यानले उठाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्-“धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनु को झै हाम्रो पिंडा पनि उहि हो । निर्माणाधिन माझी बस्तीले पनि रिण बोकेर नै बसेकोछ । स्थानिय सरकार , सरोकारवाला निकाय तथा बिभिन्न दक्ताहरुलाई माझी बस्तिसंग जोडिदिने हाम्रो प्रयासमा धेरै मनकारी सहयोगीहरु भेटिनु भयो अनि आफ्नो क्षमता, दक्षता र गक्षले भ्याए सम्मको सहयोग गर्नु भयो । तर केहि यस्ता दाताहरु पनि भेटिए जस्ले सहयोग रकम बोल्नु भयो तर सहयोग उपलब्ध गराउनु भएन । हामिले कुनै जोर जबर्जस्ती नगरिकनै आफ्नै मनले, स्वस्तस्फुर्त रुपमा कबुल गर्नु भएको सहयोग प्रदान गर्नलाई आनाकानी गर्नेहरुको लिष्ट लामै छ । खैर , दान (धर्म र कर्म भनेको मनदेखी स्फुटन हुने कुरा हो । हामिले त सहयोगको अपिलसम्म गर्ने हो ,बलजफती गर्ने होईन । तथापी , आफ्नो प्रतिवद्दता र कटिवद्दतालाई भुलेर गरिवहरुको आशा र भरोशा माथी खेलवाड गर्नु भने पक्कै राम्रो होईन । पुरा गर्न नसक्ने(बाचा, पुर्ती गर्न नसक्ने (आस्वासन र दिन नसक्ने (सहयोगको कुनै अर्थ छैन । अत स् आफुलाई समाज सेवी को रुपमा चिनाउन कोही कसैको भरोशा माथी खेलवाड नगरौ ।”